Tolotra avy amin’ny vadin’ny filoha, Rajoelina Mialy: nahazo fitaovana ireo “Vehivavy miketrika” ao Toamasina | NewsMada
Tolotra avy amin’ny vadin’ny filoha, Rajoelina Mialy: nahazo fitaovana ireo “Vehivavy miketrika” ao Toamasina
Noporofoin’ny vadin’ny filoha, Rajoelina Mialy, tetoToamasina, fa ny fandraisan’ny vehivavy anjara amin’ny famokarana no tokony hatao zava-dehibe raha tiana handroso ny firenena. Nitsidika ny tany an-toerana ity filoha nasionalin’ny fikambanana Fitia ity, omaly
alatsinainy. Niara-namboly hazo fihinamboa toy ny mapaza, ny voatsokina ary ny anana niaraka amin’ny vondrom-pikambanana “Vehivavy miketrika”, tarihin’i Sabotsy Alphonsine; tetsy Mangarano, ny tenany tamin’izany. Nambaran’ireto vehivavy ireto fa afaka namorona fomba fitadiavam-bola ny renim-pianakavina isakyny fikambanana nisy azy tany nandritra iny fihibohana. “Tapaka karama sy fitadiavam-bola ny ankamaroany. Hitan’ny ONG St Gabriel izany ka notohanany tamin’ny alalan’ny “La Fabrique”, nanome ny tantsoroka rehetra, nahatongavana amin’izao”, hoy izy ireo.
Fampidiram-bola ao an-tokantrano
Tafiditra amin’ny fandraisana andraikitry ny vehivavy amin’ny fampidiram-bola ao an-tokantrano izany, araka ny nambaran’ny filohan’ny “Vehivavy miketrika” hatrany. Niroso tetsy amin’ny Chambre des metiers, ivontoerana ahitana ireo rehetra momba ny asa tanana ataon’ny vondrom-pikambanam-behivavy eto Toamasina ny rehetra taorian’ny fambolen-kazo. Notanterahina tamin’izany ny nanoloran’ny vadin’ny filoham-pirenena ireo fitaovana hanodinana ireo voankazo ho ranomboankazo, azo tahirizina ka hanatsara ny fidiram-bolan’ireo renim-pianakaviana.